Kedu ụdị ekpere dị ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kedu ụdị ekpere ahụ
Kedu ụdị ekpere ahụ. E nwere ụdị ekpere dị iche iche na Baịbụl. Ọ bụghị mgbe niile ka ekpere kwesịrị ịdị otu, ebe anyị nwere ike ikpegara Chineke ekpere n'ọtụtụ ụzọ. Ekpere bụ ịgwa ya okwu. Dị nnọọ ka anyị na ndị enyi anyị na-enwe mkparịta ụka dị iche iche, anyị nwekwara ike inwe ọtụtụ ahịrịokwu dị iche iche dabere n'ihe ndị gbara ya gburugburu.
Otú ọ dị, anyị ga-akpachara anya na ekpela ekpere na-ezighi ezi. Ekpere na-ezighi ezi bụ nke na-adabaghị na uche Chineke. Enwere ụfọdụ ụdị ekpere na-adịghị mma mgbe niile:
Ahịrịokwu nwere ihe achọrọ: Anyị enweghị ike ịchọ ihe n'aka Chineke, na-emejọ anyị, n'ihi na O ji anyị ụgwọ ọ bụla. Anyị ga-eji obi umeala kpee ekpere
Ahịrịokwu dị n'akụkụ: ekpere nke a na-eji dị ka afa ma ọ bụ ọnụ ka ihe ọjọọ mee.
Ekpere jupụtara n’ụgha: Chineke maara mgbe anyị na-agha ụgha, anyị apụghị iduhie ya. Anyị kwesịrị ịna-eme ihe n’eziokwu n’ebe Chineke nọ
Otú ọ dị, Bible na-egosi anyị ụdị ekpere dị iche iche anyị pụrụ ikpe. Ka anyị na-ekpekwu ekpere, ka anyị na-achọpụtakwu ụdị ekpere. Ndị a bụ naanị ụfọdụ ụdị ekpere dị na Baịbụl:
1 Olee ụdị ekpere dị na Baịbụl
1.1 1. Ekpere otuto na ekele
1.2 2. Arịrịọ
1.3 3. Nkwuputa
1.4 4. Arịrịọ
1.5 5. Ekpere otu
1.6 6. Ekpere n’asusu di iche iche
1.7 7. Rịọ maka enyemaka
Olee ụdị ekpere dị na Baịbụl
1. Ekpere otuto na ekele
Anyị nwere ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji na-eto Chineke ma na-ekele ya. Ọ dị ezigbo mkpa cheta ihe nile Chineke bu na ihe nile o meworo maka anyi. Otuto bụ ụzọ isi gosipụta ekele. Site n'ekpere nke otuto na ekele, anyị na-enweta ọṅụ n'ime Chineke.
M'gēji obim nile kele Gi, Jehova;
M ga-agwa gị niile dị ebube.
M'g beteghari egwú ọ andù, anduri kwa nime gi;
M ga-abụku aha gị abụ, Onye Kasị Elu.
Abụ Ọma 9: 1-2
Anyị dabere na Chineke maka ihe niile. Ya mere, mgbe anyị chọrọ ihe, anyị ga-arịọ Chineke. Anyị nwere ike ịjụ:
Nkwado: ka Chineke nye anyị ihe anyị chọrọ n'oge kwesịrị ekwesị. Ọbụna n'oge ihe isi ike, Chineke na-enyere anyị aka ịkwado onwe anyị.
Amamihe: maka ghọta ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi na otu esi eme ihe.
Usoro: imara uzo aga. Chineke nwere ike ịza ekpere ahụ n'ọtụtụ ụzọ.
Nrọ: ka O wee nyere anyị aka imezu ha.
Anyị nwere ike ịrịọ Chineke ọtụtụ arịrịọ ma e wezụga ihe ndị a. Ma nke ka nke, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịjụ Nke ahụ -eme ka uche Chineke.
Unu echeb aboutula onwe -unu n'ihe ọ bula; kama ka amara Chineke n'iru unu n'ekpere na aririọ nile, ya na ekele.
Ọ dị ezigbo mkpa ckwupụta mmehie gị nye Chineke, na-arịọ maka mgbaghara. Chineke na-agbaghara ndị chegharịrị. Ekpere nke nkwuputa na-enwere onwe ya na ịdị arọ nke mmehie.
Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesiri ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara mmehie anyị, na sachapụ anyị ajọ omume niile.
1 Jọn 1: 9
Kpee ekpere maka ndị ọzọ ọ bụ akụkụ nke ịbụ Onye Kraịst. Ndị ọzọ chọrọ ekpere anyị ka: zọpụta, gwọọ, tọhapụ onwe ha, dozie nsogbu, enyemaka, nkwado, nwee ume ... Chineke na-anụ ekpere anyị na nyere ndị anyị na-ekpe ekpere aka.
"Na-ekpe ekpere mgbe niile na ekpere niile na aririọ na Mmụọ Nsọ, na-ekiri na nke a na niile ntachi obi na aririọ nile nke ndị nsọ."
Ndị Efesọs 6:18
5. Ekpere otu
Ekpere ọnụ na ndị kwere ekwe ndị ọzọ dị ike nke ukwuu. TO Chineke nwere mmasị ịhụ Ụka ya United. Ekpere otu na-eme mgbe onye ọ bụla na-ekpekọ ekpere ọnụ maka otu ọnọdụ ahụ ma ọ bụ mgbe otu onye na-ekpe ekpere ma ndị ọzọ ekweta.
Mb͕e ha kpesiri ekpere, ebe ha zukọrọ we ma jijiji; ha nile we juputa na Mọ Nsọ, we were nkwuwa-okwu nēkwu okwu Chineke.
6. Ekpere n’asusu di iche iche
Ikpe ekpere n’asụsụ dị iche iche bụ ụzọ nke ikwe ka Mụọ Nsọ na-eduzi ekpere anyị. Nke ahụ mara mma mgbe anyị na-amaghị otú e si ekpe ekpere n'ọnọdụ. Onye nwere onyinye a kwesiri iji ya mee ihe.
N'ihi na onye nēkwu okwu n'asusu di iche, ọ bughi madu nāgwa okwu, kama ọ nāgwa Chineke okwu; n'ihi na ọ dighi onye nāghọta Ya, ọ bu ezie na ọ bu Mọ Nsọ ka Ọ nēkwu ihe-omimi.
1 Ndị Kọrịnt 14: 2
7. Rịọ maka enyemaka
Podemos tukwasinu onwe-ayi ibu n'aka Chineke. Mgbe anyị nwere nsogbu, anyị nwere ike ịgwa gị mmetụta anyị ma rịọ maka enyemaka gị. Mgbe ụfọdụ a "Chineke na-enyere!" Mkpu enyemaka bụ ekpere nke onye ewedara n'ala, onye tụkwasịrị obi na enyemaka nke Chineke.
Lee m anya ma meere m ebere
N'ihi na m nọ naanị m na-eru uju.
Ihe mgbu nke obi m abawo ụba;
Wepụ m nhụjuanya m.
Abụ Ọma 25: 16-17
Ugbu a amatala m Kedu ụdị ekpere dị na Baịbụl. Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere ụzọ dị iche iche isi kpee ekpere dabere n’ọnọdụ anyị nọ na ya. Site na Discover.online Anyị nwere olileanya na akụkọ a enyerela gị aka. Ọ bụrụ ugbu a, ịchọrọ ịma otú e si ekpegara Chineke ekpere dị ka Bible si kwuo, na-agagharị na weebụsaịtị anyị.
Nke bụ nmehie isi asaa
Otu esi enwe obi ụtọ n'alụghị nwanyị